safarka jet Private waa wax gaar ah. Waa gaar ah. Waxaad ku raaxaystaan ​​waan qalbiqaboojin iyo waxyaabaha of diyaarad oo dhan, oo dhan naftaada by. shaqaale ah oo dhan waa inaad hesho adeeg diyaar u tahay inay la kulmaan oo dhan waxa aad dalbatay inta lagu guda jiro safarka.
Waxba barbardhigay u heersare ah oo u Raaxaysay adeegga charter a size bartamihii diyaaradiisa khaaska ah. Xitaa xarrago ee raaxada ugu qaalisan dunida aan ku dhow yahay inuu waxa aad arki doontaa marka aad talaabo gudaha qaar ka mid ah Diyaaradaha gaarka ah. Waxaad ka heli kartaa Arrimaha Gudaha jet in dhamaato la item kasta hal of raaxo ka ciyaartoyda music dambeeyay in telefishannada aad marnaba arkay ka hor inta a. alaabta raaxada The aad ka heli gudaha noocan oo kale ah diyaarad aan waa kuwa aad si fudud u iibsan kartaa. Waxay yihiin war kooban oo ka mid ah noocyada raaxada ugu fiican.
jet Private qaadataa raaxo heerka ku xiga. Waxa kale oo ku siinayaa macnaha cusub in xawaaraha iyo hufnaan. Iyada oo adeeg charter a size bartamihii diyaaradiisa khaaska ah, aad gaari doonaa meesha aad u socoto si degdeg ah. Diyaaradaha Kuwani duuli dhaqso badan ugu diyaaradaha ganacsiga. Qaar ka mid ah safar xawaare sarre ah 982 km / h. this Isku kula xaqiiqada ah in safarka diyaaradiisa khaaska ah aad ka badbaadisaa jeegaga ammaanka dheer iyo xafiisyada ee garoomada diyaaradaha waaweyn iyo waxaad ka heli doontaa oolnimada sare iyo sahlanaato.
waxyaabaha jet Private waa mid ka baxsan dunidan. Waxaad ku raaxaysan karaan Roob kulul ka hor soo degtey. Tani waxay kaa caawin doontaa si loo yareeyo Artur Miani. Inta lagu guda jiro safarka aad, waxaad ka heli ugu fiican ee cuisines, madadaalo, iyo qalabka wax soo saarka.
Waxaad sabab kasta in ay isticmaalaan adeegga size bartamihii gaarka ah jet halkii la isticmaalayo airline ganacsi. Warren Buffet, milkiilaha Berkshire Hathaway ayaa mar sheegay in adeegga jet gaarka loo leeyahay ayaa u oggolaaday inuu sameeyo wixii uu isagu marnaba samayn kari lahaa haddii uu isticmaalayo airline ganacsi. adeegga jet gaarka loo leeyahay size super in heerka ku xiga idinka qaadan doonaa ganacsiga.
Super Mid-size Noocyada Jet